Andriamby Chuck Manufacturers & Suppliers | China andriamby Chuck Factory
Ny tena fampiasana sy ny toetra mampiavaka ny herinaratra Chuck: X91 Heavy-adidy mahitsizoro tarafin'ny herinaratra Chuck andian-dahatsoratra ity ny herinaratra Chuck dia ampiasaina ho an'ny nitotoana azy planing milina sy ny milina. Ny mampiavaka ity andian-dahatsoratra: suction mahery, azo antoka sy azo antoka ny fampiasana, mety mba manamboatra izay tsy mety workpiece ny milina clamping .Ny karazana vokatra X91F afaka misakana fikosoham-bary sy ny PLA ...
Ny tena fampiasana sy ny toetra mampiavaka ny herinaratra Chuck: 1.X11 herinaratra ara-dalàna mahitsizoro Chuck dia tandindon 'andriamby workholding fitaovana ho an'ny surface grinder milina sy ny fikosoham-bary milina. 2.Used fa mbola minono andriamby conductivity workpieces mba achive raikitra toerana sy ny fanodinana. 3. Ny lafiny io andian-dahatsoratra: suction hery tsara nozaraina, Nametraka azo itokisana, mora ny miasa. 4 ...
marindrano Lathe , Sheet Metal Machines , Lathe Machine , hiondrika Machine , Metal Lathe , Lathe ,